09/09/2019 (Nairobi, Kenya) Bishii labo iyo tobaanaad, 2018-dii, waxaa magaalada Baydhabo oo ah xaruunta ku meel-gaarka ah ee dowlad-gobaleedka Koofur Galbeed (DKG) Soomaaliya waxaa ka dhacday doorasho aan xor iyo xalaal midna lagu tilmaami Karin, ilaa maanta ay dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay jawaab waafi ah u la’ yihiin wixii dhacay.
Hadda dib ugu laaban meeyno, wixii dhacay sharaxaadooda, laakin aan is weydiino (DOORASHADAII GUMAADKA IYO DHIIGA BADAN DARTEEDA LOO DAADIYEY KADIB, MAXAA U QABSOOMAY KGS?).
Doorashadaas dhiiga badan darteeda loo diiday waxaa lagu cimmaamaday ama maqaar-saar ahaan loogu doortay, Mudane C/casiis Maxamed Xasan (Lafta-gareen) oo ahaa wasiir ka tirsan xukuumada Ra’iisulwasaare Xasan Cali khayre ka hor inta aan dhiiga loo daadin si looga dhigo Madaxweynaha Koofur Galbeed.
Markaanu isku dayno in aanu ka jawaabno, su’aasha gubdhigga u ah qormadaan, maxaa u qabsoomay KGS iyo wixii kaloo aan ka ogahay anigu qof ahaanteyda, dhammaan ballan-qaadyadii uu sameeyey Mudane C/casiis Laftagareen, hal mid ah oo uu fulliyey majirto ,markii la eego dhinacyada: Amniga, Dhaqaalaha, Maamul-Wanaaga, Caddaaladda iyo Sinnaanta Metelaada Qabiilada ee Maamulka Koofur galbeed Soomaaliya.
Amniga Maxaa ka hirgalay?
Amniga koofur-galbeed Soomaaliya wuxuu gacanta ka baxay maalintii C/casiis lafta-gareen sida qasabka iyo jujuubka ah ay ku doorteen Xildhibaanada Koofur-Galbeed oo awood ka tan weyn loo adeegsaday, waxaana dhacay inta uu joogay:
in qaar ka mid ah qaabaa’illada Koofur-gGalbeed Soomaaliyeed hogaaminta aan wanaagsaneeyn ee C/casiis laftagreen darteed, ay muddo sanada ah kadib in maagalada baydhabo gudeheeda, labo qabiil dagaal sookeye dhexmaro, ilaa haddana aan wax xal ah lagala gaarin, waanwaan muuqatana la dhex dhigin,
Waxaa kaloo dhacay, in dilal qorsheysan, lagu bartilmaameedsado, shaqsiyaad haladoor ah oo reer Koofur-Galbeed ah, soona bataan dilalka noocaas ahi, deeganada Koofur-Galbeed Tusaale, haldoorka qaarijinta noocaas ah ku baxayna waxaa la mid ah: Allaha u naxariistee, Mudane siyaasi Cali Marguusi oo beertiisa lagu dhex dila, misna la aasi kari waayey dagaal socodo dartiis.
Waxaa in mudo ah kadib magalaada Baydhabo iyo magaalooyinka waaweyn ee Koofur-Galbeed ka dhaqan galay ammarada Ururka UGUS, magalada Baydhabo mudo isbuuc ah koranto ma heysan, sababtoo ah, amar ka yimi Ururka UGUS, dhacdooyinka amniga ku saabsan inta aan halkaan ku xusan, waa ka badan yihiin.
Dhaqaalaah maxaa ka qabsoomay?
Mudane C/casiis Laftagreen afkiisa ayuu igu sheegay shaqsi ahaan, wax dhaqaalaha in aysan Koofur-Galbeed ka jiran ayna adag tahay sida ay ku noolaan lahaayeen shacabku, balse aysan isaga dhib ku hayn oo bil awalba uu helaayo $150,000 USD (Boqol iyo Konton kun oo Dollar) oo ka timaado Dowlada Federalka Soomaaliyeed ee wakiil ugu yahay Koofur-Galbeed Soomaaliya, waa inta aan afkiisa ka maqlay annagoo wada fadhina.
Maamul Wanaaga maxaa ka hirgalay?
Waxa maamul wanaag ah ee ka jir Koofur-Galbeed ma jirto, mudo sanad ku dhowaad ayuu jooga C/casii Laftagareen, welina su’aal la iskama weydiin away MADAXWEYNE KU XIGEEN? Taasi ayaa cadeeyn kugu filan in uu san wax maamul wanaag ah ka jirin maamulkaas, xitaa maamulkuna dhameys tirneyn.
Caddaalada maxaa ka hirgalay?
Caddalada waa wax keliya ay ummadi ku kala badbaadi karto laakin maamulka Koofur-Galbeed uu mudane C/casiis Laftagareen u hogaamiye xita waxay hilmaameen erayga “CADDAALAD” maxaa yeelay shacabka Koofur-Galbeed sii joogta ayey ciidamada KG u dilaan, ilaa maanta shaqsi maxakaamad lasoo taagayna malahan, taasi waxaa marqaati iga ah mudane C/casiis Lafta-Gareen mar uu la hadlaayey ciidamada, ayuu sheegay in qof rayid ah oo muruq maalato ah loo dilay 5,000 shiling soomaali ah oo ila hada askarigii dilay aan maxkamad lasoo taagin.
Maxaa ka hirgalay dhanka awood qeybsiga?
Majirto wax metelaad ah oo ay u dhan yihhin qaabaa’ilada dega Koofur Galbeed, waxa keliya meesha ka taliye waa hal reer oo kuli ku heyb ah ama ka soo wada jeeda, jufada Madaxweyne Mudane C/casiis Laftagareen Tusaale aad ku qanacdaan aan idin siiyo.
Mudane C/casiis Laftagareen, Madaxweyne KGS.
Zamzam Mahad C/raxmaan, madaxa xafiiska Madaxweynaha Dhanka haweenka isla markaana ah, xaaska madaxweynaha hal reer ayey kasoo wada jeedaan (Isku-beel).
Ibrahim Baafo, Agaasimaha Madaxatooyda Koofur-Galbeed (Isku-Beel).
General Mahad, oo mar dhow loo magacaaabay taliyaha ciidamada asluubta qaranka soo jeedin uu sameeyey c/casiis Laftagareen dib, waana sudogiisa, ka hor wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliska koofur galbeed ,waa shaqsigii sida cad u yiri xabad ayaan idin kugu jawaabeynaa hadii aad soo banana-baxdaan wuxuun u qaabilsnaa ololaha C/casiis Laftagareen dhanka amniga iyo caburinta shacabka (isku-Beel).
C/fataax Mahad C/raxmaan ,waa xoghayaha madaxweynaha waana seedigii (Isku-Beel)
Intaas Iyo in kabadan ayaa jirto sidaas darteed maqaalkaan kuma soo koobi karo ee hadii Alle idmo qormooyin kale ayaan ku soo bandhigi doonaa.
Waxa keliya ee shacabka koofur galbeed Soomaaliya u qabsoomay waa Maamulkii oo isku bedelay maamul ay hal reer leeyihiin, hadii shacabka sidaa ku daawadaan waxaa faraha ka bixi doono inta yar ee u harsan.
Waxaa shacabka la gudboon, in eey baraaruga oo ah ka dhiidhiyaan dulmiga dhan kasta ah oo gaammuray, oo lagula kacayo.
Waxaan qormadeydaan ku soo gaba-gabeynayaa, in Mudane C/casiis Laftagareen wakhtiga u harsan uu yahay 3 sano wax badan, wax badan ayuuna ku dabili karaa mudadaas kuwuuna sixi karaa khalad farabadan, ee hadda inta goori goor tahay, ha ka faa’iideysto mudda u hartay oo ha noqodo, hoggaamiye daacad ah oo in kastoo anuu doorasho xaq ah ku imaan, hadana xaqa is garab taaga.
Maxamed Cali Barre
Foojignaan: Qormadaan waa ra’yiga qoraha.
Waxaad kala xiriiri kartaa qoraha:
Posted in ARTICLES, HOME, NEWS
Previous Kenyan Peacekeepers are Enemy Within Sent In Somalia by an Enemy Country:
Next British Parliament LIVE